UNWTO European Commission meeting includes WTN Board member Aleksandra Gardasevic-Slavuljica representing Montenegro | eTurboNews | Isbeddellada | Wararka Safarka ee khadka tooska ah
Shirka UNWTO ee Yurub waxaa ka mid ah xubin ka tirsan WTN Aleksandra Gardasevic-Slavuljica oo mataleysa Montenegro
Guddiga gobolka ee UNWTO ayaa kulankoodii ku soo gabagabeeyay magaalada Athens. Xubin ka tirsan guddiga Shabakada Dalxiiska Adduunka oo matalayay Montenegro ayaa ka dhawaajisay muhiimada uu gobolka Balkan u leeyahay safarka iyo dalxiiska warshadaha adduunka.
Xubnaha reer Yurub ee Ururka Dalxiiska Adduunka (UNWTO) ayaa ku kulmay Athens kulankoodii 66aad ee Guddiga Europ.e
Raiisel wasaaraha Giriigga Kriakos Mitsotakis iyo madaxweyne ku xigeenka komishanka midowga yurub Margaritis Schinas ayaa goob joog ahaa.
Sacuudi Carabiya waxaa casuumay Giriigga si uu uga soo qeyb galo kulanka yurub isagoo hada furay xarun goboleed dalka Boqortooyada Sacuudiga.
Aleksandra Gardasevic-Slavuljica, Gudoomiyaha Shabakada Dalxiiska Adduunka (WTN) Kooxda Xiisaha Balkan, ayaa kaqeybgalay shirkii UNWTO oo matalayay Montenegro.
Guddiga UNWTO Yurub wuxuu la kulmay ka soo horjeedka taariikhda Xogta UNWTO ee ugu dambeysay iyo aragtiyada laga qabo dalxiiska caalamiga ah iyo macnaha guud ee baaqyada isuduwidda dib u bilaabista dalxiiska in aan taageerno kaliya waaxda laakiin sidoo kale soo kabashada dhaqaale iyo bulsho ee ballaaran.
"Yurub waxay fursad u leedahay inay hogaamiso dib u bilaabida adduunka ee dalxiiska, si nabad ah oo masuuliyad leh," ayuu yiri Xoghayaha Guud ee UNWTO Zurab Pololikashvili. Taageerada siyaasadeed ee aan maanta arkeyno waxay cadeyn u tahay ahmiyada dalxiiska ee ka baxsan waaxdeena, dhisida kalsoonida iyo in bulshooyinka iyo dhaqaalahu ay mar kale dhaqaaqaan, ”ayuu raaciyay.
Tan waxaa ka dhawaajiyay Raiisel wasaare Kriakos Mitsotakis, oo amaanay hogaaminta UNWTO wuxuuna xaqiijiyay wadankiisa sida ay uga go'an tahay in kheyraadka loo jiheeyo dib u bilaabida dalxiiska waara. Komishanku wuxuu diirada saaray talaabooyinka wax ku oolka ah ee UNWTO ay qaadeyso si ay u hagto dib u bilaabida dalxiiska iyo taageerida malaayiinta shaqooyinka iyo ganacsiyada ku baahsan Yurub ee ku tiirsan waaxda. Tan waxaa ka mid ah xoojinta iskaashiga u dhexeeya UNWTO iyo Bangiga Yurub ee Dib-u-dhiska iyo Horumarinta. Sida lagu qeexay kulanka, labada hay'adood waxay ka wada shaqeyn doonaan sidii loo gaarsiin lahaa kaalmo farsamo oo loogu talagalay in lagu wado dib u soo kabashada dhaqaalaha dhowr dal oo Yurub ah, oo ay ku jiraan Griiga, iyo sidoo kale Croatia, Montenegro, Georgia, Tukey, iyo Turkmenistan.
Ahmiyadda dalxiisku u leeyahay qaab nololeedka reer Yurub waxaa sii aqoonsaday Madaxweyne Ku-xigeenka Komishanka Yurub. Margaritis Schinas, oo hore uga qaybqaatay UNWTO Guddiga Dhibaatada Dalxiiska Caalamiga, oo matalaya Komishanka Yurub, iyada oo dawladaha iyo hoggaamiyeyaasha qaybaha bulshada iyo kuwa gaarka loo leeyahayba ay si wada jir ah uga shaqeeyaan sidii wax looga qaban lahaa saamaynta aafada ee dalxiiska iyo qorshaynta dib u habeynta qaybta.
Marti gelinta iyo guddoominta Guddiga, Wasiirka Dalxiiska Giriigga, Harry Theoharis, ayaa hoosta ka xariiqay Taageerada adag ee siyaasadeed iyo mid ficil ee dalka ee UNWTO iyo dalxiiska adduunka laga bilaabo bilowgii dhibaatada. Giriigga, oo ah mid kamid ah meelaha loo dalxiis tago adduunka, ayaa xubin fir-fircoon ka ahaa Guddiga Dhibaatooyinka Dalxiiska Caalamiga ee UNWTO bilowgii cudurka aafada. Maaddaama uu yahay Guddoomiyaha Kooxda Farsamada, Wasiir Theoharis wuxuu ku hanuuniyey hoggaamiyeyaasha qaybaha bulshada iyo kuwa gaarka loo leeyahay dejinta xalal wax ku ool ah oo ku aaddan caqabadaha ugu waaweyn ee soo foodsaaraya dalxiiska, oo ay ku jiraan hab maamuusyo la iswaafajiyay si dib loogu ambaqaado waaxda, ma ahan oo keliya Yurub iyo adduunka oo dhan.
Intii uu hoggaaminayey Wasiirka, Wasaaradda Dalxiiska ee Giriiggu waxay ku dhawaaqday in la aasaasay xaruntii ugu horreysay ee loogu talagalay in lagu cabbiro horumarka waara ee dalxiiska xeebta iyo badda ee Bariga Mediterranean, iyadoo lala kaashanayo UNWTO. Xarunta cilmi baarista iyo la socodka waxay ku saleysnaan doontaa jaamacadda Aegean waxayna qaban doontaa oo ay falanqeyn doontaa xogta la xiriirta saameynta deegaanka, dhaqaalaha, iyo bulshada ee dalxiiska.
Shirka waxaa lagu soo gabagabeeyey doorashooyin iyo magacaabis jagooyin ka tirsan dhowr hay'adood oo UNWTO ah. Shan wadan ayaa loo magacaabay inay Yurub u matalaan Golaha Fulinta ee UNWTO (Armenia, Croatia, Georgia, Greece, iyo Ruushka). Intaas waxaa barbar socday, Hungary iyo Uzbekistan waxaa loo magacaabay musharixiinta doorka Madaxweyne kuxigeenada Golaha Guud, iyo Azerbaijan iyo Malta ayaa loo magacaabay inay u adeegaan xubnaha Guddiga Aqoonsiga. Ugu dambeyntiina, Giriigga waxaa loo magacaabay inuu noqdo Guddoomiyaha Guddiga UNWTO ee Yurub, iyadoo Bulgaria iyo Hungary loo magacaabay labadeeda ku-xigeen ee jagooyinka. Xubnaha waxay doorteen Armenia inay qabato kulanka soo socda ee Komishanka UNWTO ee Yurub.